DHAGEYSO:7 qof oo ku dhintay shilal ka dhacay Nakuru | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:7 qof oo ku dhintay shilal ka dhacay Nakuru
DHAGEYSO:7 qof oo ku dhintay shilal ka dhacay Nakuru
Wararka naga soo gaaraya ismaamulka Nakuru ayaa sheegay in labo shil oo halkaasi ka dhacay ay ku dhinteen 7 qof .
Waxaa sidoo kale dhaawacmay 6 qof oo dheeraad ah.
Dhacdooyinkan oo saameeyay gaadiidka xamuulka iyo midka dadweynaha ee loo yaqaano mataatuuda ayaa laga soo tabiyay degmooyinka Lari iyo Mai Mahiu.
Goobjoogayaasha shilalkan iyo mid ka mid ah darawaliinta ayaa warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen
Dhaawaca ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka Kijabe ee duleedka Nairobi.
Previous articleDHAGEYSO:Raila Odinga oo sheegay inay ogolaan doonaan go’aanka maxkamadda ee BBI
Next articleTokyo oo looga dhawaaqay xaalad degdeg ah